တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများ - တရုတ်နိုင်ငံ၊ Hefei ရှိလေ့လာမှုတစ်ခု (၂၀၁၂) - ယောက်ျား ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် porn ကိုအသုံးပြုကြသည် - Your Brain On Porn
comments: Porn (ပါမယ်) တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ဤလေ့လာမှုတွင်ယောက်ျား၏ 86% porn အသုံးပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2012 Nov 13;12:972. doi: 10.1186/1471-2458-12-972.
chi က X, ယု L ကို, ဆောင်းရာသီ S က.
ပညာရေးဦးစီးဌာန, ဟောင်ကောင်, ROOM တွင် 101, hoc ဘလော့ခ်, ဟောင်ကောင်, တရုတ်တက္ကသိုလ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်တစ်ဦးက Self-အစီရင်ခံမေးခွန်းလွှာစစ်တမ်း Hefei မှာ 1,500, တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအတွက်အလယ်အလတ်အရွယ်အစားမွို့၌ 2011 တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားကောက်ယူခဲ့သည်။ 1,403 ကျောင်းသားများကို (အသက် = 20.30 ± 1.27 နှစ်) ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း 93.5% ၏မြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်အတူမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။
ဖြေဆိုသူအနက် 12.6% (အမျိုးသမီး၏ 15.4% သာရှိပြီးပြည်ပမှယောက်ျားကို 8.6%) ကျောင်းသားများကို Pre-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းအစီရင်ခံ; 10.8% (10.5% အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ယောက်ျား၏ 11.2%) ပါးစပ်လိင်ရ၏ 2.7% (3.4% အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ယောက်ျား၏ 1.7%) လိင်တူချင်းလှုပ်ရှားမှုများအစီရင်ခံ; 46% (အမျိုးသမီး၏ 70.3% သာရှိပြီးပြည်ပမှယောက်ျား၏ 10.8%) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပြုအမူတွေကိုအစီရင်ခံတင်ပြ; ကြည့်ရှုအားပေး 57.4% (86.2% အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ယောက်ျား၏ 15.6%) ကျောင်းသားများကို ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာရှာမှီးအကြောင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, 13.7% (အမျိုးသမီး၏ 10.7% သာရှိပြီးပြည်ပမှယောက်ျား၏ 18%) လိင်နှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏မိဘများစကားပြော; 7.1% (အမျိုးသမီး၏ 6.1% သာရှိပြီးပြည်ပမှယောက်ျား၏ 8.4%) ကျောင်းသားများကိုဓတေားအပေါ်မိဘများနှင့်အတူစကားလက်ဆုံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတင်းအကျပ်အကြောင်း, 2.7% (အမျိုးသမီး၏ 4% သာရှိပြီးပြည်ပမှယောက်ျား၏ 0.9%) လိင်ရှိသည်ဖို့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အတင်းအကျပ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, 1.9% (အမျိုးသမီး၏ 2.4% သာရှိပြီးပြည်ပမှယောက်ျား၏ 1.2%) လိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံကဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်: အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှု, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ကြည့်ရှုအပါအဝင်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအစီရင်ခံတင်ပြ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူလိင်အကြောင်းပြောနေတာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအများအပြားဆက်စပ်မှုသီးခြားစီကွဲပြားခြားနားသောကျား၏ကျောင်းသားများအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အထီးအဘို့, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးကို, အတိတ်လိင်ပညာရေးအတွေ့အကြုံများ, အနိမ့်ပညာရေးဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်ရှိခြင်း, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအပေါ်သုံးစွဲအချိန်tနှင့်မြို့ပြဇာတိ setting များကိုသိသိသာသာပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးကျောင်းသားများအတွက်, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့်မြို့ပြဇာတိ setting များကိုရှိခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားများကိုလိင်-related အသိပညာဆည်းပူးဖို့အတှကျအကန့်သတ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ပေမယ့်တရုတ်ပြည်ရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အဆန်းမဟုတ်ပါ: အထီးကျောင်းသားများကိုသိသိသာသာပိုပြီးအမျိုးသမီးကျောင်းသားများကိုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုပြသခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းသုံးစွဲရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့်အချိန်ပိုမိုထားရှိခြင်းသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အရေးကြီးသောခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ လူငယ်များအတွက်ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလမ်းပြဖို့, လုံခြုံလိင်အကြောင်းကိုလိုအပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသိပညာများကိုပြည့်စုံလိင်ပညာရေးအစီအစဉ်များကိုအထူးသဖြင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလဖြုန်းတဲ့သူတွေကိုသူကျောင်းသားများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည် ။
လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဘဝတွေကိုရဲ့အစမှာရှိပါတယ်။ သူတို့ကဒီလမ်းခရီးဘို့ကိုပြင်ဆင်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကိုနှင့်မျိုးဆက်သစ်များ၏ကျန်းမာရေးများအတွက်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုမှတစ်ဆင့်လိင်, တိုက်ပိတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, နွေးထွေးမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းပြောနေတာနဲ့သူတို့ရဲ့လိင်သဘာဖော်ပြအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အမျိုးမျိုးကိုရည်ညွှန်း။ လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကွဲပြားခြားနားသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာများအလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် [1,2] ။ ဥပမာအားဖြင့်, လူငယ်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း [မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, ကိုယ်ဝန်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများနှင့် HIV / AIDS ရောဂါအပါအဝင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (အက်စ်တီအိုင်) ကိုအထောက်အကူပြုရန်3] ။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိလူငယ်များကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများရှိပါသည်နေစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကွဲပြားခြားနားသောတရုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရှားပါးခဲ့ကြပြီ။ ယင်းပျံ့နှံ့နှင့်လူငယ်တရုတ်လူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုနားလည်ခြင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ထိရောက်သောလိင်ပညာရေးအစီအစဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်ဤသို့တရုတ်လူငယ်ကျန်းမာဘေးကင်းလုံခြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတိုးတက်လာအောင်ကူညီလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု Hefei အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးကြီးများနမူနာတရုတ်နိုင်ငံပုံမှန်အလယ်အလတ်အရွယ်မြို့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပျံ့နှံ့နှင့်လူငယ်တရုတ်လူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များတွင်လေ့လာမှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က [လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံလိင်ဆက်ဆံမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းမျိုးစုံကိုရှုထောင့်များတွင်အများအားဖြင့်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့လေ့လာခဲ့ကြ4] ။ [ဥပမာ, လေ့လာမှုယောက်ျား၏ 80% တွေ့ရှိခဲ့နှင့်အမျိုးသမီး၏ 73% အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုကြုံတွေ့ခဲ့5] ။ ယေဘုယျအား, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ 74% [အစဉ်အဆက်တူရကီအတွက်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘဲလျက်အစီရင်ခံတင်ပြ6] ။ 8658 အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားကောက်ယူတစ်ဦးကအစီရင်ခံစာ [5% ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့တွေ့ရှိခဲ့7] ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သက်သေအထောက်အထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏အတွေ့အကြုံလူငယ်များကြားတွင်တရားမျှတစွာပျံ့နှံ့နေတဲ့ကြောင်းပြသထားတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် [25-33 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကောလိပ်အမျိုးသမီးများ၏% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအတင်းအဓမ္မထိထိမိမိကြုံနေရအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းအမျိုးသမီးများန်းကျင် 10% အတင်းအဓမ္မပါးစပ်, စအိုကြုံနေရဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် / သို့မဟုတ်မိန်းမကိုယ်လိင်ဆက်ဆံမှု8] ။ ဒါဟာ [ယောက်ျား၏ 92% နှင့်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 77% အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ masturbated ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိခဲ့9]. ဒိန်းမတ် 97.8 အတွက်ယောက်ျားများ၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 79.5% [ဟောင်း 1002-18 နှစ်ပေါင်းထံမှအသက် 30 လူတို့တွင်ညစ်ညမ်း watched10].
တရုတ်မှာတော့လေ့လာမှုကန့်သတ်အရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဖြစ်ပျက်မှုဆနျးစစျဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ 1989 ခုနှစ်တွင်, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ဘဝအပေါ်အထွေထွေစစ်တမ်းကောက် [န်းကျင် 13 အထီးကျောင်းသား% နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသား 6% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည့်ဘေဂျင်းအတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်11] ။ 1992 ခုနှစ်တွင်ရှန်ဟိုင်းမှာအလားတူလေ့လာမှု [18.8 အထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား% နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသား 16.8% အိမ်မထောင်မီလိင်အတွက်စေ့စပ်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ12] ။ 2000 ခုနှစ်, 5000 ပြည်နယ်များအတွက် 26 တက္ကသိုလ်များမှ 14 သင်တန်းသားများကိုကျော်ပါဝင်သောတစ်နိုင်ငံလုံးစစ်တမ်း [တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 11.3% လိင်ဆက်ဆံမှုကြုံတွေ့ကြောင်းထင်ရှား13] ။ ဒီအတောအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံဘေဂျင်းမြို့မှာ multi-တစ်နှစ် longitudinal လေ့လာမှု [တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်၏ရာခိုင်နှုန်း 16.9 အတွက်% 2001 မှ 32 အတွက် 2006% မှထထုတ်ဖော်14] ။ တရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အထွေထွေအခြေအနေအကြောင်းအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးသောဤရလဒ်များကိုအများစုလေ့လာမှုများသာ "Yes" ကို Single-item ကိုမွေးစားနေစဉ်သို့မဟုတ်ကျောင်းသားလိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်မခဲ့ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် "မဟုတ်ပါ" မေးခွန်းများကို။ ထိုကဲ့သို့သောလိင်တူချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အကွိမျမြားစှာရှုထောင့်, ကိုမသိရှိပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်၌တရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံလွှာမပေးနိုငျသညျ။ ထို့ကြောင့်, နောက်ထပ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုများစွာအတိုင်းအတာကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည့်ပြည့်စုံအကဲဖြတ်ရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု. ဤဖြစ်ရပ်ဆန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အရေးပါသောလိုအပ်ချက်ရှိသေး၏။
လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအများအပြားအရေးကြီးသောခန့်မှန်းအနောက်တိုင်းသုတေသီတွေကအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအမြင့်မားတဲ့အဆင့်ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အနိမ့်တန်းနှင့်အတူကျောင်းသားများအထင်ရှား, အထက်တန်းကျောင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်  ။ မြို့များကိုများနှင့်အမြို့မြို့တို့မှကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးကျေးလက်ဒေသထံမှထိုထက်လိင်ဆက်ဆံဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ခဲ့ကြသည်  ။ အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ဆိုးရွားကျောင်းမှာအောင်မြင်မှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက် [ပြီးသားသူတို့ရဲ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံးဖို့ပိုဖွယ်ရှိတို့ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုထက်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံ17] ။ လိင်ပညာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြုလုပ်ဥပမာ USA နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချို့သောနိုင်ငံများရှိတစ်ဦးအငြင်းပွားဖွယ်ဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခုအမြောက်အများကြောင့်နှင့်လူငယ်များရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တချို့က [လိင်ပညာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အဆင့်ကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်တွေ့ရှိခဲ့18] ။ တချို့ကတွေ့ရှိချက် [လိင်ပညာရေးမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပြောင်းအလဲများမဖြစ်စေအံ့သောငှါရှာတွေ့19] ။ လေ့လာရေးလေ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များအကြားတစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းသိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုတိုးလာဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြ  ။ ဒါ့အပြင်အင်တာနက်ထိတွေ့မှုနှင့်သူတို့တင်ပြသည့်မက်ဆေ့ခ်ျ [အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်ပေါ်မှာအလွန်သြဇာအချက်များဖြစ်ကြသည်21] ။ လေ့လာမှုများဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်လြှော့ခဲ့ကြပေမယ့်, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများအများစုအနောက်ပိုင်းအခင်းအကျင်းနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ နှင့်မည်သို့သောဤအချက်များလည်းတရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်မျှသုတေသနရှိပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတရုတ်အခြေအနေတွင်အပေါ်အခြေခံပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကြိုးစားမှပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေသည်ဟုအချက်များယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိအတော်များများကလေ့လာမှုများ [, အထီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းအစပျိုးဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့မှုနှုန်းပိုမိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်မိန်းကလေးများထက်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်အပြုအမူညွှန်ပြ22,23] ။ အထီး [သူတို့၏အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရဘဲလျက်နဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်နှင့်အမျိုးသမီးထက်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအစပျိုးဘဲလျက်သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်24] ။ လူငယ်များကိုမကြာခဏအတွေ့အကြုံကနေသင်ယူရ, သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုသူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမကြာခဏယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များနေရာကတည်းကဤလုပ်ငန်းစဉ်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလူငယ်များအတွက်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပိုမိုအားကောင်းလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုများ [ယောက်ျားသည်ထက်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ကိစ္စလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီ25] ။ ယောက်ျားအမျိုးသမီးထက်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကနေပိုပြီးအလိုလိုကျလက်ခံရရှိရန်လေ့ရှိပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်ပေးထား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များအဖြစ်ကောင်းစွာကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဘယ်လောက်မသိရသေးဖြစ်၏ အဘယ်အရာကိုများနှင့်မည်သို့မည်ပုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရုတ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုချိတ်ဆက်အချက်များ။ ထို့ကြောင့်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်ဘယ်လိုကျား, မကွဲပြားမှုကိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်; အဘယ်အရာကိုများနှင့်အသီးသီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြပုံကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ။
သုတေသနနောက်ခံဆန့်ကျင်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုသုံးခုမူလတန်းသုတေသနမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်: (က) Hefei အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဘယ်လိုပျံ့နှံ့နေသည်။ (ခ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဘာတွေလဲ? (ဂ) အသီးသီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲ?
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု Hefei, စက်တင်ဘာလ, 2010 အတွက်အရှေ့တရုတ်အတွက်ပုံမှန်အလယ်အလတ်အရွယ်အစားမွို့၌ကငျြးပခဲ့ခဲ့သည်။ Hefei ကိုးပြည့်စုံအများပြည်သူတက္ကသိုလ်များထိုကဲ့သို့သောသိပ္ပံ, ပညာရေး, ဥပဒေနှင့်စာပေအဖြစ်စည်းကမ်းများကို၏ကျယ်ပြန့ဖုံးအုပ်ရှိပါတယ်။ ကိုးတက္ကသိုလ်များမှလေးတက္ကသိုလ်များကျပန်း 16 အတန်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအတန်းများတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားအလားတူနံပါတ်များကို (1 ကနေအထိအမျိုးသမီးမှအထီး၏အချိုးအစားရှိပါတယ်သတ်မှတ်ထားအပေါ်အခြေခံပြီးလေးကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ကနေရှေးခယျြခဲ့သည့်အနက်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ: 1.5 မှ 1.5: 1) ။ အထူးသတစ်ခုချင်းစီကိုတက္ကသိုလ်အသီးအသီးတန်းမှာတဦးတည်းအတန်းအစားနမူနာခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောအတန်း (ဎ = 1,500) တွင်ကျောင်းသားအားလုံးဤလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မေးခွန်းလွှာစစ်တမ်းရှေ့တော်၌သဘောတူညီချက်ပုံစံကိုတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်သင်တန်းသားများကိုဖြစ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ 1,500 ဖြေဆိုသူ, 1403 ကျောင်းသားများကို 93.5% ၏မြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုညွှန်း, ပြီးစီးခဲ့မေးခွန်းပြန်လေ၏။ ကျောင်းသားအသက်အရွယ် 18% ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနှင့် 25% အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ 20.30 ထံမှ 1.27 နှစ်ပေါင်း (M = 59.2, SD က = 40.8) အားမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ သင်တန်းသားများကို၏အသေးစိတ်လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများစားပွဲတင်အတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် 1.
ယင်းနမူနာသင်တန်းသားများ၏လူမှုရေး-လူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ပရိုဖိုင် (n /%)
အဆိုပါမေးခွန်းလွှာစစ်တမ်းကိုပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူစာသင်ခန်း setting တွင်တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားသုတေသနလက်ထောက်များကကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိုင်းတာခြင်းအခါသမယမှာလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များမိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်နှင့်အကောက်ခံအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များထပ်တလဲလဲအားလုံးသင်တန်းသားများကိုရဖို့သေချာခဲ့သည်။ ဤအ Self-အစီရင်ခံစာအချက်အလက်များ၏တရားဝင်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အများအပြားအစီအမံဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာကျယ်ဝန်းစာသင်ခန်းစစ်တမ်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်များနှင့်ကျောင်းသားများကိုသီးခြားစီထိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်။ အထူးသတစ်ခုချင်းစီကိုစစ်တမ်းအခါသမယမှာတစ် 100-ထိုင်ခုံဟောပြောပွဲခန်းမမေးခွန်းလွှာဖြည့်စွက်ရန်မပို 40 ထက်ကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာနှင့်သုတေသနလက်ထောက်ဖြစ်နိုင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးစည်းဝေးကြ၏။ အဆိုပါအတန်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်များ၏အဘယ်သူမျှမဆရာများစစ်တမ်းတလျှောက်လုံးတက်ပြသခဲ့သည်။ တတိယ, ကျောင်းသားများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်အခြားကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးရန်ခွင့်မပြုခဲ့သညျ။ စတုတ္ထ, ကျောင်းသားများအနေနဲ့ရိုးရိုးသားသားလမ်းအတွက်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတင်းကျပ်လျှို့ဝှက်ထားခံရနဲ့စုပေါင်းထုံးစံ၌ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မယ်လို့ထပ်တလဲလဲကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။
မေးခွန်းလွှာ၏ပထမဦးဆုံးအပိုင်းသင်တန်းသားများကို '' ကျားမနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ, အသက်, (တစ်နှစ်တာ 1 မှတစ်နှစ်တာ 4) တန်း, လေ့လာမှုစည်းကမ်း (သိပ္ပံသို့မဟုတ်အနုပညာ), ပညာရေးဆန္ဒ, ရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံ, လိင်ပညာရေးအတွေ့အကြုံနှင့်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုပါဝင်ပါသည် အွန်လိုင်းနှင့်ဧရိယာကို။ ပညာရေးဆိုင်ရာဆန္ဒအဘို့, ကျောင်းသားများသူတို့ဘွဲ့, မာစတာဘွဲ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့ဒီဂရီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အောင်မြင်ရန်ချင်ရာဒီဂရီညွှန်ပြခိုင်းတယ်။ နှစ်ဦးက "ဟုတ်ကဲ့" သို့မဟုတ် "no" ဆိုတဲ့မေးခွန်းများကိုအခုသူတို့ဒါမှမဟုတ်အတိတ်တွင်မဆိုရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရှိမရှိကျောင်းသားများကိုမေးပါ, သူတို့မရောက်မှီသို့မဟုတ်လက်ရှိလိင်ပညာရေးကိုလက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိ (လိင်ပညာရေးသင်တန်းများ, အလုပ်ရုံ, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအပါအဝင်တရားဝင်သို့မဟုတ်အလွတ်သဘောပညာရေးရည်ညွှန်း) ။ အွန်လိုင်းသုံးစွဲအချိန်, ကျောင်းသားများသူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိသုံးစွဲတစ်နေ့လျှင်နာရီပျမ်းမျှအရေအတွက်ကအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကြီးပြင်းရာတစ်ဦးကမေးခွန်းတစ်ခုကိုသူကတစ်ဦးမြို့ပြသို့မဟုတ်ကျေးလက်ဧရိယာ၌ရှိ၏ရှိမရှိ, ကျောင်းသားများမေးတယ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာ SKAT ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory ထံမှ 20 မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုပစ္စည်းများကိုတရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပါ။ 1990 အတွက် Lief ကတီထွင်ခဲ့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory  နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Fullard, Scheier, & Lief မှပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် 27] ဆယ်ကျော်သက်လိင်နှင့်ပညာရေးမှသက်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အတွေ့အကြုံအပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရယူဘို့မေးခွန်းလွှာတစ်ကြီးထွားသင့်လျော်သော, စက္ကူ-and ခဲတံ Self-အစီရင်ခံစာဖြစ်၏။ နမ်းပါဝင်သည်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်, fondling, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး (ဥပမာထုတ်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်အဆိုပါ 20 မျိုးစုံ-ရွေးချယ်မှုကို item-မေးခွန်းလွှာ လိင်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ချစ်သူ / ရည်းစားနှင့်အတူစကားပြော), လိင်ဆက်ဆံမှု (ဥပမာ, ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်း)နှင့်လိင်အတင်းအကျပ်။ ဖြေဆိုသူ (က Likert စကေးအပေါ်ဖြေကြား1 လစဉ်ထက် =,2= Less ဘယ်တော့မှမ, = လစဉ်,3= အပတ်စဉ်,4= နေ့စဉ် 5) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောစုစုပေါင်းရမှတ်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများရှိခြင်းညွှန်ပြ။ တရုတ်စကားစပ်နှင့်အတူ fit နိုင်ဖို့အတွက်အတိုင်းအတာဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်နှစ်ယောက်ကျွမ်းကျင်သူဘာသာစကားနှစ်မျိုး (အင်္ဂလိပ်, တရုတ်) (တဦးတည်းအထီးနှင့်တစ်အမျိုးသမီး) စပီကာများကပထမ-ဘာသာပြန်ထားသော Back, ပြီးတော့ 14 တက္ကသိုလ်အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည်ကျောင်းသားများကိုအုပ်စုတစ်စုအင်တာဗျူးများအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်5အားဖြင့် နောက်ဆုံးတော့ကျွမ်းကျင်သူသုံးသပ်ရေးနှင့် 400 တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနမူနာအတူရှေ့ပြေးစမ်းသပ်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုများအတွက်ထောက်ခံမှုရဖို့နိုင်ရန်အတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့2ပစ္စည်းများ ( "သင်တစ်ဦးပါတီသို့မဟုတ်ဘားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး "နှင့်" သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်ခုနှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုအပေါ် Go ပြီလူစိမ်းနှင့်အတူနေအိမ် Going") တရုတ်အခြေအနေတွင်မှဆီလျှော်ခဲ့ကြသည်ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြသည်နှင့်အ 18 ပစ္စည်းများနှင့်အတူ uni-ရှုထောင်တရုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကေးတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်မေးခွန်းလွှာ၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှု Cronbach ရဲ့ alpha = 0.84 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမေးခွန်းလွှာများတစ်ဦးချင်းစီကို item များအတွက်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အရာခိုင်နှုန်းတရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်တစ်ဦးဖော်ပြရန်ပရိုဖိုင်းများကိုတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကျား, မကွဲပြားမှုဆနျးစစျဖို့လွတ်လပ်သော t-စမ်းသပ်မှုများကအထီးကျောင်းသားများနှင့်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများကိုအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ တတိယဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမေးခွန်းလွှာအပေါ်သင်တန်းသားများကို '' စုစုပေါင်းရမှတ်မှီခို variable ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ကွိမှလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းအချက်များ, သိရှိနိုင်ဖို့ဖျော်ဖြေကြသည် ဟူ. ၎င်း, အသက်, တန်း, ပညာရေးဆန္ဒ, ရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအတွေ့အကြုံ, မူရင်းရာအရပျ / ဧရိယာနှင့်အချိန်ရွေးချယ်ရေး variable ကိုအဖြစ်ကျား, မအတူလွတ်လပ်သော variable တွေကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်အွန်လိုင်းနေခဲ့ရသည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Windows အတွက် SPSS, ဗားရှင်း 17.0 သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
စားပှဲ2ပြီးခဲ့သည့်တစ်နှစ်အတွက်စုစုပေါင်းနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်က (10.8%) ပါးစပ်လိင်စေ့စပ်နှင့်ကျောင်းသားငယ်တစ်နံပါတ် (12.6%) လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သညျ။ 2.7% ကျောင်းသားများကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့န်းကျင်အနည်းငယ်ကျောင်းသားများကို (46%), လိင်တူချင်းလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ ကျောင်းသားတစ်နှစ်ခွဲ (57.4%) နောက်ဆုံးတစ်နှစ်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင် / ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုအားပေးထက်နှင့်ပိုပြီး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးမှအသုံးအနှုန်းများခုနှစ်, 75.6% ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်လိင်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ သို့သော်လိင်နှင့်ဓတေားအကြောင်းကိုမိဘများနှင့်ပြောဆိုသောကျောင်းသားများကိုအသီးသီး, သာ 13.7% နှင့် 7.1% အဘို့မှတ်။ အတင်းအကျပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, 2.7% ကျောင်းသားများကိုလိင်ဆက်ဆံရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်အတင်းအကျပ်နှင့်အ 1.9% ကျောင်းသားများသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အတွက်လိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related အပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှု (ဎ /%)
ပြီးခဲ့သည့်တစ်နှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအုပျစုအကြားကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကျား, မကွဲပြားမှုတစ်ဦးကွဲပြားဒီဂရီရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအချို့ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သိသိသာသာကျား, မကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ ယောက်ျားကပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ် (84.6%), တိုက်ပိတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (70.3%) ကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အမျိုးသမီးထက်သူငယ်ချင်းများကို (86.3%) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ် (53.6%) နှင့်အတူလိင်အကြောင်းပြောနေတာ, ညစ်ညမ်းဗွီဒီယိုများ (85.9%) နှင့်မဂ္ဂဇင်းများ (84.5%) ကို အသုံးပြု. (အသီးသီး 36.1%, 10.9%, 15.6%, 9.3%, 85.9% နှင့် 36%) ။ ဓတေားအကြောင်းကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောအတွက်အတန်အသင့်သိသိသာသာကျားခြားနားချက်အထီး (57.4%) အမျိုးသမီးထက်သန်ဓတေား (40.4%) အကြောင်းကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ဖေါ်ပြခြင်းရှိ၏။ အမျိုးသမီး (အသီးသီး 49.1%, 42.7% နှင့် 29.9%) အမျိုးသားများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုချိန်းတွေ့ (51.7%) သတင်းပေးပို့ (32.4%) နမ်းခြင်းနှင့် fondling (26.5%) ။ ဒါဟာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးများဖြစ်ကြသည်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အစီရင်ခံရန်အတန်ငယ်ပိုများပါတယ်ခဲ့ကြသည်ပုံရသည်။ ယောက်ျားလေးများ (စားပွဲတင်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်နှင့်အမျိုးသမီးပိုပြီးနွေးထွေးမှုအစီရင်ခံရန်တော်မှာ3နှင့်စားပွဲတင် 4).
အထီး / အမြိုးသမီးအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related အပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှု (ဎ /%)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related အပြုအမူတွေ: ကျား, မများကခြားနားချက် (SD က±မီတာ)
ယောက်ျား / အမျိုးသမီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းအချက်များ
linear ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအသီးသီးအချက်များ (အွန်လိုင်းသုံးစွဲအသက်, တန်း, စည်းကမ်း, ပညာရေးဆန္ဒ, စိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးလိင်ပညာရေးအတွေ့အကြုံ, ကျေးလက်ဒေသ / မြို့ပြဧရိယာနှင့်အချိန်) သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်အပြုအမူတွေကိုချိတ်ဆက်, ဆနျးစစျဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းယောက်ျားငါးအချက်များသိသိသာသာနောက်ဆုံးတစ်နှစ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့: ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမျိုး (β <- ။ ၂၉ နှစ် p <0.001), လိင်ပညာရေး (β <-13, p <0.001), ပညာရေးမျှော်မှန်းချက် (β <-09, p <0.05), အွန်လိုင်းသုံးစွဲအချိန် (β .09, p <0.01) နှင့်(ရိယာ (β <-.07, p <0.05) ။ အချက်ငါးချက်သည်အမျိုးသားများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ ၁၉% ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်အချက်နှစ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် - romantic connection (β <-46, p <0.001) နှင့်(ရိယာ (β <-.09, p <0.01) ။ အချက်နှစ်ချက်သည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ ၂၇% ကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ အသက်၊ အတန်းနှင့်စည်းကမ်းများကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်သိသိသာသာမဆက်စပ်ပါ (ဇယား 5).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-related အပြုအမူတွေ၏ခန့်မှန်း: ကျား, မများကကွဲပြားခြားနားမှု
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှတုန့်ပြန်တဲ့သူ Hefei အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှု၏နှုန်းထားများ (12.6% အထီးနှင့်အ 15.4% အမျိုးသမီး) 8.5% ကြ၏။ တှေ့ရှိ ဤရွေ့ကားနှုန်းထားများ 1995 ကတည်းကတခြားတရုတ်မြို့ကြီးတွေမှာတရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်သတင်းပေးပို့သည့်ပ္ပံအတွင်းလဲကျ [16,28,29] ။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းတရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှု၏နှုန်းထားများနှင့်အတူအလားတူသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းဒေသများသို့မဟုတ်နိုင်ငံများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိနှုန်းထားများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဘယ်သူမျှမကြီးတွေကနျြတဲ့အံ့သြဖွယ်ပြောင်းလဲမှုခံကြပေါ်လာပါဘူး။ ဥပမာ, လက်ထပ်ဘယ်တော့မှလူငယ်အသက် 22 နှစ်ပေါင်း 20% 2004 အတွက်ထိုင်ဝမ်လိင်ခဲ့ဘဲလျက်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်  ။ နှောင်းပိုင်း 2003 အတွက်ကောက်ယူဗီယက်နမ်လူငယ်၏စစ်တမ်းအကဲဖြတ်အတွက်ကြောင့် 16.7 နှစ် 2.4% ယောက်ျားနှင့် 18% အမျိုးသမီးအသက် 25 [လိင်ဆက်ဆံခြင်းစေ့စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်31] ။ ထိုကဲ့သို့သောထိုင်ဝမ်, ကိုရီးယား, ဗီယက်နမ်နှင့်ဂျပန်အဖြစ်အာရှအတွက်ဒေသများ, ယောက်ျားမိန်းမတို့ခပ်သိမ်းသောကာလမှာစိတ်ခံစားမှုအကွာအဝေးကနေစနစ်တကျသူတို့ကိုယ်သူတို့လုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းလိင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌မျှော်လင့်အတူတူပင်ကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒ-based ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုမျှဝေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် လက်မထပ်မီကိုမဆိုအဆက်အသွယ်  ။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအများနှင့်စီးပွားရေးအရကွဲပြားခြားနားသောကာလအဘို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာလူမှုရေးအရအပြင်ဘက်လွှမ်းမိုးမှုမှပွင့်လင်းခဲ့ကြပေမယ့်, သူတို့ရဲ့ခွဲဝေမှုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနေဆဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အမြစ်တွယ်။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တရုတ်ပြည်ရာခိုင်နှုန်းအထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 80% နှင့်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား 73% ဝန်းကျင် 74% တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ 1990s စဉ်အတွင်းလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်စကော့တလန်ရှိခဲ့ကွောငျး USA တွင်လေ့လာတွေ့ရှိနှုန်းထက်အများကြီးနိမ့်ကျန်ရစ် စောစော 2000s [33,34] ။ ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေတွင်ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကတိကျတဲ့ဥပမာ 2005 နှင့်တက္ကသိုလ်များတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစိတ်ပျက်အားလျော့သောအခြေအနေတွင်ပူဇော်သည်အထိပညာရေးတရုတ်န်ကြီးဌာနတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားတားမြစ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်များစွာသောတက္ကသိုလ်များကျောင်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ကျောင်းသားများအတွက်အကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုကန့်သတ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တိုင်းကျောင်းသားကျောင်းကမှာနေထိုင်ရပါမယ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအမျိုးသမီးဆောင်ဝင်ခွင့်မပြုသဖြင့်, ကျောင်းသားများကို 10 မတိုင်မီပြန်ဆောင်ခြင်းငှါလာကြရမည်ဖြစ်သည်: 30 ညနေ 10 မှာများသောအားဖြင့်အနီးကပ်ဆောင်တံခါးကတည်းက: 30 ညနေ, မီး 11 မှာပိတ်ထားအတူ: 30 ညနေ။ လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုများအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိင်တူချင်းလှုပ်ရှားမှုများ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံးကျောင်းသားများကိုပါးစပ်လိင်ဆက်ဆံနှင့်အတူ, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားကတခြားလုပ်ရပ်များရှိခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, အတင်းအကျပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရ။ ရလဒ်လုံခြုံလိင်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းအဖြစ် abstinence ပေးဆောင်ရွက်ပြီး, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာ, ကွန်ဒုံးများနှင့်ဓတေားအသုံးပြုမှု, အကာအကွယ်အဘို့အသင့်လျော်ခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလိင်အပြုအမူအကြားအပါအဝင်ပြည့်စုံလိင်ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးမသာကြောင်းလိင်ပညာရေးညွှန်ပြစေခြင်းငှါ လူငယ်များ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသို့မဟုတ် (ဥပမာညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းများကြည့်ရှု) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာလေ့လာဆည်းပူး၏အခြားနည်းလမ်းတွေပေါ်ရှိအခြားလူများနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းကိုကျောင်းသားများကိုမေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမေးခွန်းလွှာခြောက်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအပေါ်ဆက်သွယ်ရေးမှလေးစားမှုနှင့်အတူလက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုလိင်အပေါ်မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆက်သွယ်ရေးအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်ထက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အတော်လေးခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောခဲ့တာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု [အမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားယောက်ျားနှင့် 40% ၏ 60% sex အကြောင်းသူတို့၏မိဘများနှင့်ပြောဆိုသောခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်35] ။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုကသာ 13.7% (10.7% အထီးနှင့်အ 18% အမျိုးသမီး) ကျောင်းသားများကိုလိင်, သာ 7.1% အကြောင်းကိုမိဘများ (6.1% အထီးနှင့်အ 8.4% အမျိုးသမီး) နှင့်ပြောဆိုသောကျောင်းသားများသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အတွက်ဓတေားအကြောင်းကိုမိဘများနှင့်ပြောဆိုသော တရုတ်နိုင်ငံတွင်။ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမိဘများ [မြီးကောင်ပေါက် '' အသက်တာ၌ကစားပေးထား35] ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပညာရေးကိုအတွက်မိဘပါဝင်ပတ်သက်မှုတိုးမြှင့်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့အများဆုံးသူတို့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှရေးဆွဲသည့်အခါဥပမာ, မိဘနှငျ့ဆကျသှယျနှင့်ပွင့်လင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၌လိင်အကြောင်းကိုကလေးငယ်များပညာပေးရန်အားပေးတိုက်တွန်းရပါမည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုလည်းကျောင်းသားများ, ထိုကဲ့သို့သောစာအုပ်တွေ / မဂ္ဂဇင်း / ဗီဒီယို / ဝဘ်ဆိုဒ်များအဖြစ်ညစ်ညမ်းမြင်၏အထူးသဖြင့်အထီးကျောင်းသားများကို၏ကြီးမားသောအချိုးအစားဖော်ပြခဲ့တယ်။ ထိုသို့ညစ်ညမ်းတရုတ်လူငယ်များအတွက်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်အလက်များ၏အဆင်သင့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဖြေဆိုသူ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အပေါ်အချို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့ကြပေမည်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ [တရုတ်နိုင်ငံတွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်ပညာရေးအတွက်ညစ်ညမ်းသည့်အကြောင်းအရာများထည့်သွင်းဖို့အတော်လေးလိုအပ်သောဖြစ်လာ15] ။ ဥပမာအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းများ၏သရုပ်မှန်နှင့်မီဒီယာများနှင့်ဘဝအကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. လူငယ်ပညာပေး, ရောင်ပြန်ဟပ်ထင်နှင့်လူအသုံးပြုရန်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ညစ်ညမ်း၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ, လူငယ်များအဘို့အတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဆှေးနှေးဖို့ကျောင်းသားများကိုအားပေးအားမြှောက်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပညတ္တိကျမ်းကအကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ လိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်တရုတ်နှင့်အမေရိကန်တို့၌ပြုလုပ်ခဲ့သောယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်29,36,37] ။ လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှု၏ခြားနားချက်ယောက်ျားလေးများအဘို့သော်လည်းအိမ်မထောင်မီလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုကျမ်းပိုဒ်တစ်လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရိုးထုံးတမ်းစဉ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းသတိပြုသဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ, မိန်းကလေးများ [တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့် stigmatized ခံရဖို့လေ့ရှိပြီးမကြာခဏကိုယ်ဝန်နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဘို့အပြစ်တင်နေကြသည်38] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစတင်နှင့်အဆုံးသတ်ဘို့တာဝန်ယူမိသားစုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနေဆဲမျှော်လင့်ထားသည့်ယောက်ျားကနေသဘောထားများနှင့်ယုံကြည်ချက်။ အမျိုးသမီးများလက်ထပ်ထိမ်းမြားမီနှင့်လျော့နည်းလိင်စတင်ယောက်ျားထက်အပျိုကညာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည် [14,39] ။ လိင်စိတ်ကူးယဉ်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုလည်းလိင် drive ကိုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သုတေသနပျမ်းမျှယောက်ျားတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းလိင် drive ကိုရှိသည်နှင့်ပိုပြီး [အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ပေးထက်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု40] ။ တနည်းအားဖြင့်လိင်စိတ်ကူးယဉ်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကြီးမားသောကျား, မကွဲပြားမှုလူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်များကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ အမည်းစက်အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောတရုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အမျိုးသမီး autoerotic အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ဆက်လက်; ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည် [တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှုန်း underreport စေခြင်းငှါ38].
ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းသောကြောင့်, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်အတိတ်နှစျတှငျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဖြစ်ပွားမှုအပြုသဘောရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာအတှေ့အကွုံရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လိင်ပညာရေးကိုလက်ခံရရှိ, နိမ့်ပညာရေးဆန္ဒ, အွန်လိုင်းသုံးစွဲကြာကြာအချိန်နှင့်အထီးအဘို့မြို့ပြဧရိယာကိုအသကျရှငျနှင့်ရှိခြင်းခဲ့သည် အမျိုးသမီးများအတွက်မြို့ပြဧရိယာထဲမှာရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးအတွေ့အကြုံနှင့်လူနေမှု။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုခန့်မှန်းဖော်ထုတ်အားလုံးအချက်များအနက်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာအတှေ့အကွုံရှိခြင်းသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအအင်အားအကောင်းဆုံးရှင်းပြချက်ပါဝါရှိခဲ့ပါတယ်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများချိန်းတွေ့, အထူးသဖြင့်တည်ငြိမ်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့အချက်ကြောင်းသက်သေပါပြီ။ ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစားရှိခြင်းလိင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စေခြင်းငှါအရာ, ထိုကဲ့သို့သောနမ်းခြင်းနှင့် fondling အဖြစ်ရင်းနှီးခြင်းနှင့် precoital အပြုအမူတွေ, မြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစားရှိခြင်းလိင်အကြောင်းပိုမိုအလိုလိုစံချိန်စံညွှန်းဝေမျှစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်မိတ်ဆွေအသစ်တစ်စုံမှလူငယ်တစ်ဦးဖော်ထုတ်မည် များစွာသောလေ့လာမှုတွေအဘယ်သူ၏သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအားပေးလိင်တက်ကြွဖြစ်ခြင်းတစ်ခုတိုးလာဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်သောလူငယ်သရုပ်ပြပါပြီ။ ထို့ကြောင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လူငယ်များရငျးနှီးမှုနှငျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အပိုလိုအပ်ချက်ရှိသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု [ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လူငယ်များဆီသို့ပညာရေးအားထုတ်မှုပစ်မှတ်ထား၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြု41] ။ ကျောင်းများနှင့်မိဘများ, အထူးသဖြင့်, ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်သူများလူငယ်များကိုကူညီသင့်တယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသိပညာမဩဝါဒပေးအပါအဝင်ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်နွေးထွေးမှုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, လုံခြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
ရရှိထားသည့်လိင်ပညာရေးအထီးကျောင်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုရှင်းပြဖို့ကဒုတိယသြဇာအရှိဆုံးအရင်းအမြစ်ရှိပါတယ်။ အထီးအဘို့, လက်ခံရရှိလိင်ပညာရေးနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံများမပါဘဲတွေထက်သိသိသာသာပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါက [လိင်ပညာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများလျော့သင့်ကြောင်းတရုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ "ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်" နဲ့ကိုက်ညီမှုဖြစ်ဟန်42] ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ [မကြာသေးမီကဒေတာကို "ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်" ပိုကောင်းတဲ့လူငယ်များကာကွယ်ပေးမပြုခဲ့ကြောင်းပြသကြပုံရ43-45] ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လိင်ပညာရေးဘာသာရပ်များတရုတ်တက္ကသိုလ်များရွေးကောက်ပွဲသင်တန်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာလိင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှိသည်သောကျောင်းသားများနှင့်ဆက်စပ်သောဘာသာရပ်များရွေးချယ်ဖို့ကပိုများပါတယ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ လိင်ပညာရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး [ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်46] ။ လိင်ပညာရေးကဘာလဲအခန်းကဏ္ဍသနည်း? အဆိုပါသုတေသီများအမြင်ပန်ရဲ့အချက်နှင့်အတူသဘောတူ: "လိင်ပညာရေးမ '' Accelerator '' အဖြစ်တစ်ဦးတည်းပြဇာတ် '' မီးသတ်ဘူး '' အခန်းကဏ္ဍမဟုတ်ဘဲလုပ်ဆောင်ချက်များကို; လိင်ပညာရေး၏အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီ, အထူးသဖြင့်လာမယ့်မျိုးဆက် [တတ်နိုင်သမျှတစ်ဦး '' ပျော်ရွှင်လိင်ဘဝ '' ကိုခံစားကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်46] ။ "အမည်, လိင်ပညာရေးသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဂရုစိုက်, သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေယခုနှင့်အနာဂတ်အတွက်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုဆည်းပူးကူညီဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသူတို့ကိုများကိုပေးစွမ်းလိင်တစ်ဦးအပြုသဘောအမြင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူငယ်များကူညီသင့်ပါတယ်။ သို့သော်သာမန်အားဖြင့်လိင်ပညာရေးမြှင့်တင်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခမဲ့လူမှုရေးရာသီဥတုတရုတ်နိုင်ငံ၏မရှိခြင်းစဉ်းစားပါကလိင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့တက္ကသိုလ် system များကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးစွာတက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်နားလည်မှုထည့်သွင်းရန် "ဘေးကင်းလုံခြုံ" နေရာသို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။ တက္ကသိုလ်များတွင်လည်းအခြားနေရာများတွင်ထက်လိင်အကြောင်းပြောဆိုရန်ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည် ဖြစ်. , ထို့ကွောငျ့, ငြင်းခုံမှုများပိုမိုနက်ရှိုင်းနှင့်ပိုပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ [ပိုများသောပွင့်လင်းဖြစ်ရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အတွေးအခေါ်များနှင့်အမြင်များချမှတ်လေ့47].
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်အထီးအဘို့အပညာရေးဆိုင်ရာဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပညာရေးဆန္ဒအဆိုးနည်းလိင်တက်ကြွ, အမည်ရသည့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆန္ဒ, အထီးကျောင်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်းလိင်တက်ကြွစွာနှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်လာရာမှပညာရေးဆိုင်ရာ protected ဖြေဆိုသူအတွက်ကောင်းစွာလုပ်နေဖို့ကတိကဝတ်အဆိုပါရှာတွေ့ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်ကြိုတင်လေ့လာမှုများ . Finally, အွန်လိုင်းသုံးစွဲအချိန်အထီးအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီးခဲ့သည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအွန်လိုင်းသုံးစွဲအချိန်အနည်းငယ်ပိုပြီးလိင်တက်ကြွ, အထီးကျောင်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, အမည်ရကြာကြာ surfing အင်တာနက်အချိန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ အထီးကျောင်းသားများကိုအနီးကပ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သောသွားရောက်လည်ပတ်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, မိတ်ဖက်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုရှာကြံနှင့်အွန်လိုင်းပါဝငျ၏အများကြီးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက [ဖြစ်နိုင်သည်49] ။ သူတို့ရဲ့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပေါ်သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်မှုလူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်ကိုအင်တာနက်နှင့်ညစ်ညမ်းမီဒီယာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအနာဂတ်သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. တရုတ်အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လူငယ်အကြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ, အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလျှော့ချနှင့်စနစ်တကျလိင်ပညာရေးများအတွက်သိကောင်းစရာများအရင်းအမြစ်အဖြစ်အင်တာနက်ကိုအသုံးချပြီး.
ဒီလေ့လာမှုကအများအပြားန့်အသတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာက၎င်း၏ Cross-Section ဒီဇိုင်းထိုကဲ့သို့သောပညာရေးဆန္ဒအထီးကျောင်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့မှုကဒီလေ့လာမှုမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလျော့နည်းသွားခြင်းရှိမရှိအဖြစ်အကြောင်းမရှိ-and effect ကိုအသင်းအဖွဲ့များ, ဖော်ထုတ်မှကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာတစျမြို့တော်နှင့်လူမှုလူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွင်းကျောင်းသားများကိုတရုတ်ပြည်နယ်များအတွင်းကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်တက္ကသိုလ်ကန့်သတ်ခံခဲ့ရကတည်းကဒုတိယ, ဒီလေ့လာမှုမှာရရှိသောရလဒ်များသည်, ရှိသမျှတရုတ်လူငယ်တွေကိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုတရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအဖို့ယေဘူယျမရသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အောက်မှာ-အစီရင်ခံခြင်းဖြင့်မိတ်ဆက်ဖြစ်နိုင်ချေဘက်လိုက်မှုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှုရေးလိုလားအကျိုးသက်ရောက်မှုများအောက်တွင်-အစီရင်ခံရန်ဦးဆောင်ခဲ့ကြပေမည်, Self-အစီရင်ခံစာများနှင့်ပါဝင်သူ sensitivity ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ လူမှုလိုလားစကေးအနာဂတ်စစ်တမ်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို Hefei အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ကြိမ်နှုန်းညစ်ညမ်း, လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးကိုမြင်လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအဖြစ်ကျား, မကွဲပြားမှုများ၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူကွဲပြားကြောင်းထင်ရှား။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသိသိသာသာရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်ကွောငျးဖျောပွခဲ့, လိင်ပညာရေး, ပညာရေးဆန္ဒ, အထီးကျောင်းသားများအတွက်အွန်လိုင်းနှင့်ဧရိယာကိုသုံးစွဲအချိန်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကျောင်းသားရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဧရိယာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်တရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်ပညာရေးမြှင့်တင်မှာပစ်မှတ်ထားထိရောက်သောနှင့်ဖြစ်နိုင်မဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်လိင်ပညာပေးဘို့အရေးကြီးပါသည်။
အားလုံးစာရေးဆရာများသည်ဤသုတေသန၏ဒီဇိုင်းကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ XC နှင့် Ly စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေနှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးဆွဲ; XC လေ့လာမှုစိတ်ကူးနှင့်စစ်တမ်းများတွင် SW အားဖြင့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အနောက်တောင်ဘက်တွင်ကိုလည်းသုတေသန, စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးဆရာများနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖတ်ပါနှင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာ Hefei အတွက်4တက္ကသိုလ်များထဲတွင်ပါဝင်သူနှင့်သုတေသနလက်ထောက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာအလွန်လေးတက္ကသိုလ်ကြီးတက္ကသိုလ်ကော်မတီကထံမှထောက်ခံမှုတန်ဖိုးထားတယ်။
Crossette ခမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ: အဆိုပါပျောက်ဆုံးနေ Link ကို။ လုံး Fam Plann ။ 2005;36(1):71–79. doi: 10.1111/j.1728-4465.2005.00042.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူငယ်များရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံဖော်ကြောင်း Marston ကို C ဘုရင်အီးအချက်များ: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2006;368(9547):1581–1586. doi: 10.1016/S0140-6736(06)69662-1. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တန်ဂျေ, Gao XH, ယု YZ, Ahmed က ni, Zhu HP က, ဝမ် JJ, ဒူ YK ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လက်မထပ်ရသေးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအမျိုးသမီးလုပ်သားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ, စိတ်နေသဘောထားနှင့်အပြုအမူ: တစ်နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်။ BMC Publ ကနျြးမာရေး။ 2011;11:917. doi: 10.1186/1471-2458-11-917. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကောင်းစွာ K ကို Collumbien M က, Slaymaker အီး, Singh ကအက်စ် et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေး 2: အခြေအနေတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာရှုထောင့်။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2006;368(9548):1706–1728. doi: 10.1016/S0140-6736(06)69479-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Reinisch JM, ဟေးလ်, CA, Sanders လုပ် SA, တစ်ဦးအနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်တက္ကသိုလ်မှ Ziemba-Davis ကအမ်မြင့်အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြား: A confirmatory စစ်တမ်း။ Fam Plann ရှုထောင့်။ 1995;27(2):79–82. doi: 10.2307/2135910. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gökengin: D, Yamazhan T က, Özkaya: D, Aytuǧ S က, Ertem အီး, Arda B, Serter ဃလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ, သဘောထားနှင့်တူရကီအတွက်ကျောင်းသားများ၏အန္တရာယ်အပြုအမူ။ J ကို SCH ကနျြးမာရေး။ 2003;73(7):258–263. doi: 10.1111/j.1746-1561.2003.tb06575.x. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လိင်တူချင်းနှင့် oppositve-လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအတွက် Eisenberg အမ်ကွာခြားချက်များ: တစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းကနေရလာဒ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2001;30(6):575–589. doi: 10.1023/A:1011958816438. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fiebert M က, ပျော့အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာများအပေါ်ကျားနှင့်လူမျိုးစုများ၏ Osburn K. Effect ။ လိင် & ယဉ်ကျေးမှု။ 2001;5(2):3–11. doi: 10.1007/s12119-001-1015-2. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kaestle ကို C, Allen က K. ကျန်းမာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၏အခန်းက္ပ: လူငယ်လူကြီးများ၏သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011;40(5):983–994. doi: 10.1007/s10508-010-9722-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gert MH ။ Young ကလိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုအတွက်ကျားကွာခြားချက်များ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2006;35(5):577–585. doi: 10.1007/s10508-006-9064-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang က SB ။ AIDS ရောဂါအသိပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလိပ်ကျောင်းသားများကတခုတခုအပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ AIDS ရောဂါ Bull ။ 1993;4: 78-81 ။
လီ H ကို, Zhang က KL ။ HIV / AIDS ရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူမှုရေးအပြုအမူသိပ္ပံပညာ၏တိုးတက်မှု။ (တရုတ်) ချင်းပြည်နယ် J ကို Prev Med 1998;2: 120-124 ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပညာပေးအပေါ်သုတေသနအုပ်စု။ 2000 တရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစစ်တမ်းအပေါ်အစီရင်ခံစာ။ (တရုတ်) လူငယ်လေ့လာ 2001;12: 31-39 ။
ပန်သည် SM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးနှင့်ခေတ်ပြိုင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ 2008 ။ မှရယူရန် http://blog.sina.com.cn/s/blog_4dd47e5a0100ap9l.html.
ma QQ, Kihara MO ကို, Cong LM, Xu GZ, Zamani S က, Ravari သည် SM, Kihara အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများနှင့် HIV ပိုးကူးစက်မှု၏အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောစွန့်စားမှုနှင့်အတူအကူးအပြောင်းအတွက်တရုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအသိအမြင်: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု။ BMC Publ ကနျြးမာရေး။ 2006;6:232. doi: 10.1186/1471-2458-6-232. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zuo XY, အဘိဓါန် Lou CH, Gao အီး, Cheng Y ကို, Niu HF, Zabin LS ။ သုံးအာရှမြို့ကြီးများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အိမ်မထောင်မီလိင်ခွင့်ပြုချက်အတွက်ကျားကွာခြားချက်များ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2012;50: S18-S25 ။ [PubMed]
ဝူ J ကို, Xiong, G, ရှီအက်စ်လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ, သဘောထားများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အပြုအမူပေါ်မှာ။ (တရုတ်) ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏တရုတ်ဂျာနယ် 2007;15(2): 120-121 ။
ဝမ် B, Hertog S က, Meier တစ်ဦးက, အဘိဓါန် Lou ကို C, Gao အီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဘက်စုံလိင်ပညာပေး၏အလားအလာ: Suburban ရှန်ဟိုင်းကနေတွေ့ရှိချက်။ int Fam Plan ကိုရှုထောင့်။ 2005;31(2):63–72. doi: 10.1363/3106305. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bastien S က, Kajula L ကို, Muhwezi ဒဗလျူဆာဟာရအာဖရိကမှာလိင်နှင့် HIV / AIDS ရောဂါနှင့် ပတ်သက်. မိဘကလေးဆက်သွယ်ရေး၏လေ့လာမှုတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Reprod အနာကိုငြိမ်းစေ။ 2011;8(1):25. doi: 10.1186/1742-4755-8-25. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Marine BV, Kirby DB, Hudes ES, ကွိုင်း KK, ဂိုမက်ဇ CA. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ရည်းစား, မိန်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် '' အန္တရာယ်။ လိင် Reprod ကျန်းမာရေးရှုထောင့်။ 2006;38(2):76–83. doi: 10.1363/3807606. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Strasburger VC ကို, Wilson က BJ, ဂျော်ဒန် AB ။ သားသမီးတို့, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မီဒီယာ။2။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage; 2009 ။
လီ SH, Huang က H ကို, Cai Y ကို, Xu, G, Huang က FR, Shen XM ။ Shangai အတွက်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (တရုတ်) ၏မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆုံးအဖွတျ BMC Publ ကနျြးမာရေး။ 2009;9:195. doi: 10.1186/1471-2458-9-195. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ma QQ, Kihara MO ကို, Cong LM ။ et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအစောပိုင်းစတင်: တစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်အချက်, HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်။ BMC Publ ကနျြးမာရေး။ 2009;9:111. doi: 10.1186/1471-2458-9-111. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang က HM, လျူ BH, Zhang က GZ ။ et al ။ ဘေဂျင်းတွင်ဘွဲ့ကြိုအကြားလိင်ဆက်ဆံဘို့အန္တရာယ်အချက်များ။ (တရုတ်) ချင်းပြည်နယ် J ကို SCH ကနျြးမာရေး 2007;28(12): 1057-1059 ။
သီချင်းစတုရန်းမိုင်, Zhang က Y ကို, Zhou ဂျေ et al ။ လိင်အသိပညာ, သဘောထား, အပြုအမူများနှင့်ဘုံအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားဝယ်လိုအားအပေါ်နှိုင်းယှဉ်။ တရုတ်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ 2006;21(4): 507-509 ။
Lief HI, Fullard W က, Devlin SJ ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်၏တစ်ဦးကနယူးတိုင်း: SKAT-တစ်ဦး။ လိင်ပညာရေးနှင့်ကုထုံး၏ဂျာနယ်။ 1990;16(2): 79-91 ။
Fisher က TD, Davis က CM, Yarber WL, Davis က SL ။ လိင်-Related ဆောင်ရွက်ချက်များ၏လက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်: Routledge; 2010 ။
လီတစ်ဦးက, ဝမ်တစ်ဦး, အိမ်မထောင်မီလိင်နှင့်ဘေဂျင်းတွင်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဆီသို့ Xu ခတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏သဘောထား။ (တရုတ်) Sexology 1998;7: 19-24 ။
Zhang က Ly, Gao X ကိုသည် Dong ZW, Tan က YP, Wu ZL ။ ဘေဂျင်းတရုတ်အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက်အိမ်မထောင်မီလိင်လှုပ်ရှားမှုများ။ လိင် Transm dis ။ 2002;29(4):212–215. doi: 10.1097/00007435-200204000-00005. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chiao ကို C, ရီ CC ကို။ ထိုင်ဝမ်လူငယ်များအကြားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအိမ်မထောင်မီလိင်နှင့်ကျန်းမာရေးရလဒ်များ: အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများက '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အမြင်နှင့်ဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှု။ 2011;23: 1083-1092 ။ Doi: 10.1080 / 09540121.2011.555737 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lind ဗန် Wijngaarden JW က de ။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်အရှိဆုံးအားနည်းချက်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြား HIV အန္တရာယ် (စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဦးဆောင် Exploring အချက်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဟနွိုင်း, ဗီယက်နမ်: ယူနီဆက်; 2006 ။
ဟောင်ကောင် W က, Yamamoto J ကို, Chang က DS ။ et al ။ ကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလိင်။ J ကို Am Acad Psychoanal ။ 1993;21: 405-419 ။ [PubMed]
Reinisch JM, ဟေးလ်, CA, Sanders လုပ် SA, အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်တက္ကသိုလ် Ziemba-Davis ကအမ်မြင့်အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြား: A confirmatory စစ်တမ်း။ Fam Plan ကိုရှုထောင့်။ 1995;27: 79-82 ။ Doi: 10.2307 / 2135910 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Raab GM က, ဘန်းသည် SM, Scott, G, Cudmore S က, Ross ကတစ်ဦး, ဂိုးသည် SM, O 'Brien က F, Shaw တီ HIV ပိုးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ။ AIDS ရောဂါ။ 1995;9: 191-197 ။ [PubMed]
Zhang က Ly လီ XM, Shah က ih, Baldwin W ကတရုတ်နိုင်ငံ, Stanton တို့ခမိဘ-ဆယ်ကျော်သက်လိင်ဆက်သွယ်ရေး။ EUR J ကို contraceptives Reprod ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ 2007;12(2):138–147. doi: 10.1080/13625180701300293. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gao Y ကို, Lu ZZ, ရှီ R ကို Sun, XY, Cai Y. AIDS ရောဂါနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်လူငယ်များအဘို့လိင်ပညာရေး။ Reprop ဓာတ်မြေသြဇာ Dev မှ။ 2001;13: 729-737 ။ Doi: 10.1071 / RD01082 ။ [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Petersen JL, Hyde JS ။ လိင်သဘောထားနှင့်အပြုအမူများတွင်ကျားမကွာခြားချက်များ: Meta-analytics ရလဒ်များနှင့်အကြီးစား Datasets ၏တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ J ကိုလိင် Res ။ 2001;48(2-3): 149-165 ။ [PubMed]
Kaljee LM, အစိမ်းရောင်က M, Riel R. et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမည်းစက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, နှင့်ဗီယက်နမ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား abstinence: အန္တရာယ်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် HIV များအတွက်အကာအကွယ်အပြုအမူတွေ, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်မလိုချင်သောကိုယ်ဝန်။ J ကို Assoc သူနာပြုအေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှု။ 2007;18: 48-59 ။
Baumeister RF, Catanese KR, Vohs KD ။ လိင် drive ကို၏အစွမ်းသတ္တိကိုတစ်ဦးကျား, မကွာခြားချက်ရှိပါသလား? သီအိုရီအမြင်များ, အယူအဆဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့်သက်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများ၏သုံးသပ်ချက်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2001;5:242–273. doi: 10.1207/S15327957PSPR0503_5. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ်ခလီသည် XM, Bonita အက်စ် et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, ဆက်သွယ်ရေး၏ပုံစံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်လက်မထပ်ရသေး Out-of-ကျောင်းကိုလူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ BMC Publ ကနျြးမာရေး။ 2007;7:189. doi: 10.1186/1471-2458-7-189. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
VanOss Marine DB, Kirby B, Hudes ES, ကွိုင်း KK, ဂိုမက်ဇ CA. ဂိုမက်ဇ: လိင်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ရည်းစား, Girlfriend နှင့်ဆယ်ကျော်သက် '' အန္တရာယ်။ လိင် Reprod ကျန်းမာရေးရှုထောင့်။ 2006;38(2):76–83. doi: 10.1363/3807606. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dawson DA ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပညာပေးသက်ရောက်မှု။ Fam Plann ရှုထောင့်။ 1986;18(4):162–170. doi: 10.2307/2135325. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Xu မေး, တန် SL, တရုတ်အတွက်တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးများအကြား Pau G. အမရည်ရွယ်သောကိုယ်ဝန်နှင့်သွေးဆောင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ BMC ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုသုတေသန။ 2004;4:1–4. doi: 10.1186/1472-6963-4-1. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကနျြးမာရေး၏တရုတ်န်ကြီးဌာန။ 2003, 2004, 2005 များအတွက်နျြးမာရေးအတှကျတရုတ်စာရင်းအင်းအကျဉ်းချုပ်။ http://www.moh.gov.cn/news/sub_index.aspx?tp_class=C3
UNAIDS ၏။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ AIDS ရောဂါကပ်ရောဂါအပေါ် UNAIDS ၏အစီရင်ခံစာ။ 2010 ။ မှရယူရန် http://www.unaids.org/globalreport/global_report.htm.
ပန်သည် SM ။ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်ပညာရေးအကြောင်းပြောနေတာ။ ပြည်သူ့အင်အားသုတေသန။ 2002;26(6): 20-28 ။
Huang က YY, ပန်သည် SM, ဖုန်ကြားရှင် T က, Gao yn ။ တရုတ်တက္ကသိုလ်များမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးမဩဝါဒ ပေး. : ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို, အတွေ့အကြုံများ, နှင့်စိန်ခေါ်မှုများ။ လိင်ကျန်းမာရေးအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2009;21(4):282–295. doi: 10.1080/19317610903307696. [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roberts သည် SR, မော့စ် RL ။ The Impact မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အသက်အရွယ် 12-17 များအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာ Aspire အပေါ်ရှိပါတယ်။ Wichita ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, 2007 ။ စစ။ 155-156 ။ (ထို 3rd နှစ်ပတ်လည်ဆုပ်ကိုင်စာတမ်းဖတ်ပွဲ၏တရားစွဲဆိုထား) ။
တရုတ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကြားတွင်ဟောင်ကောင် Y ကိုလီ XM, မော်စီတုန်း R ကို, Stanton တို့ခကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: လိင်ပညာပေးနှင့် HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2007;10(11): 161-169 ။ [PubMed]